Sheekh Shibli oo ka hadlay in Masaajidada loo xiri karo Coronavirus dartiis | Xaysimo
Home War Sheekh Shibli oo ka hadlay in Masaajidada loo xiri karo Coronavirus dartiis
Sheekh Shibli oo ka hadlay in Masaajidada loo xiri karo Coronavirus dartiis
Inta badan dalalka caalamka aya aalaga soo saaray amarro lagu xirayo masaajidyada, si loo yareeyo faafitaanka cudurka dunida faraha ba’an ku haya ee coronavirus. Laakiin Soomaaliya ayaan wali laga xirin masaajidyada, inkastoo cudurkan uu gaaray goor hore.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo baxayay warar sheegaya in dad badan oo Soomaali ah ay kasoo horjeedaan xiritaanka masjidyada.
Magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, oo ka mid ah meelaha ay Soomaalida badan ku nool yihiin, ayaan salaadda jimcaha laga tukanin isbuucii afaraad oo xiriir ah, iyadoo dhammaan masaajidyada aysan jameeco ka soconin.
Inta badan dalalka Islaamka, waxaa la baddalay aadaankii salaadda, waxaana dadka lagu boorrinayaa in qof walba uu ku tukado meesha uu ku sugan yahay.
Laakiin dadka badankood su’aalaha ay isweydiinayaan waxaa ka mid ah inay bannaan tahay in laga tago khudbada salaadda Jimcaha ee waajibka ah.